Xaflad qurxoon oo ka dhacday Malmö [Sawirada] | Somaliska
Xaflad si heersare loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyada Soomaaliyeed ee HIDDO IYO DHAQAN ee magaalada Malmö ee dalka Sweden ayaa shalay oo aay taariikhdu tahay March 22, 2012 lagu qabatay Garoonka Kubada cagta ee Malmö kaas oo kuyaal koofurta Magaalada Malmö.
Xafladaas oo loogu tala galay Isdhexgalka ayaa waxaa lagu furay Cayaar dhex martay Kooxda Kubbada cagta ee Hiddo iyo Dhaqan iyo Kooxda Kubbada cagta ee Poliska wadanka Sverige.
Waxaa ka soo qeebgalay Madax iyo marti sharaf kale oo ka tirsan Dowlada Sweden iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed ee Malmö waxaa meesha ka hadlay Gudoomiyaha jaaliyada HIDDO IYO DHAQAN kaasoo ku dheeraaday wax qabadka Jaaliyada iyo dalaalka looga baahanyahay Bulshada soomaliyeed ee ku nool wadanka Sweden.
Waxaa kale oo asna meesha ka hadlay ninka caanka ku ah xaga orodka wadanka Sweden oo heesta 23 horyaalka wadanka Swdeden xage Orodka iyo hal Yurubiyaan ah ee Mr Diirshe Oriye.
Oriye ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed aduunka laga tixgaliyo loona baahan tahay in dadka iyo dalka aad ku nooshahay si fiican loola dhaqmo.
Waxuu kale oo amaanay Gudoomiyahay Jaaliyad HIDDO IYO DHAQAN Mudane Warsame Yaasiin iyo waliba Gudiga Jaaliyada isaga oo ku amaanay sida aay isugu howshay wax ka qabadka arimaha soomalida iyo waliba muujinta dhaqanka suuban ee soomaliyeed waxuuna illaah uga baryaay in sharaftii iyo karaamadii ay ku lahaayeen caalamka.Illaah u soo celiyo umada Somaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee, munaasaba loogu tala galay isdhexgalka laguna Qabtay Malaadada Malmö ee wadanka Sweden ayaa ku soo gaban gaboowday jawi aad u dagan iyo farxad.
By Siyaad Cabdi Cali Wararka Somaliska.com
Maashaa Allaah waa arrin wanaagsan inaan la ilaawin hidaheena iyo dhaqankeena aana dadyowga kale tusno inaan nahay dad hida iyo dhaqan ay ku fanaan leh. Halkaa ka sii wada reer Malmö waana idiin hambalyeynayaa in badan.
George Afrah 'joorje afrax' says:
HABNALYO, aan lee yhay maadaama laga hadley — HIDDAHA&DHAQANKA — soomaaliyed iyo waliba is dhaxgal-ka bulshada, waayo waxaala yiri”Dariskaada diin laguma naco!” or in Rome do as the Romans do!, now; wax Qiimo iyo QAderin mudan waaye, in aad ad-ka tusto Caadooyin kaada iyo dhaqamadaa wanaag san, si CAd meel laguu gu dhigo, oon lo dhihin KUWAANI waa cawwaan!